ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခရီးသွားဖို့အကောင်းဆုံးက လေယာဥ်နဲ့လား? ကျည်ဆန်ရထားနဲ့လား? မဟုတ်ပါဘူး အကောင်းဆုံးက ဘတ်စ်ကားနဲ့သွားတဲ့ခရီးပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးဘတ်စ်ကားကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ - JAPO Japanese News
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခရီးသွားဖို့အကောင်းဆုံးက လေယာဥ်နဲ့လား? ကျည်ဆန်ရထားနဲ့လား? မဟုတ်ပါဘူး အကောင်းဆုံးက ဘတ်စ်ကားနဲ့သွားတဲ့ခရီးပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးဘတ်စ်ကားကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
ဂါ 17 Aug 2021, 10:49 မနက်
ဂျပန်နိုင်ငံကို လာတဲ့အချိန် တတ်နိုင်သလောက် လည်ပတ်စရာနေရာတွေအများကြီးကို သွားကြည့်ချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
တိုကျိုကိုလည်း သွားကြည့်ချင်တယ်၊ ကျိုတိုက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ အိုဆာကာက အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေလည်း စားကြည့်ချင်တဲ့အခါ ဘာနဲ့ဘယ်လိုသွားရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါသလဲ?
ရွေးချယ်စရာ နံပါတ် ၁ လေယာဥ်ပျံ
လေယာဥ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ၁ နာရီ ၁ နာရီခွဲလောက်နဲ့ သွားလာနိုင်တဲ့အတွက် အမြန်ဆုံးလို့ထင်ရပေမယ့် မထွက်ခွာခင်ကတည်းက လေဆိပ်ကိုကြိုရောက်နေရမှာဖြစ်ပြီး ခရီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးရတာတွေလည်း အလုပ်ရှုပ်ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လေဆိပ်တွေဟာ မြို့လည်ကောင်မှာမရှိတဲ့အတွက် ဆိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက် မြို့ထဲကို သွားဖို့ အချိန်ထပ်ကြန့်ကြာပြန်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ နံပါတ် ၂ ကျည်ဆန်ရထား
ဂျပန်နိုင်ငံလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကျည်ဆန်ရထားကို ပြေးမြင်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တိုကျိုနဲ့ အိုဆာကာကို အသွားအပြန်လုပ်ဖို့လိုလာတဲ့အခါ အသုံးအများဆုံးက ကျည်ဆန်ရထားဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဥ်နဲ့မတူတာက အချိန်ကပ်ပြီးသွားလည်း စီးနှင်းနိုင်ပြီး ဘူတာကလည်း မြို့လည်ကောင်မှာရှိတဲ့အတွက် မလိုအပ်ဘဲ အချိန်ကုန်တာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။
အချိန် ၂ နာရီခွဲလောက်ပဲ ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လေယာဥ်စီးတဲ့ကြာချိန်နဲ့ တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျည်ဆန်ရထားက ပိုမြန်ပြီး ခရီးဆောင်အိတ်စစ်ဆေးစရာလိုမျိုး အလုပ်ရှုပ်စရာလည်း မရှိတော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် ဈေးနှုန်းကလည်း မနည်းမနောပါဘဲ။
အသွားအပြန် ယန်း ၂၇၀၀၀ လောက် (မြန်မာငွေ ၃ သိန်းခွဲခန့်) ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ နံပါတ် ၃ ဘတ်စ်ကား
အဝေးပြေးဘတ်စ်ကားကို စီးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
တိုကျိုနဲ့ အိုဆာကာကို ၆ နာရီလောက် ကြာပေမယ့် အဝေးပြေးဘတ်စ်ကားအများစုက ညအချိန်မှာ သွားကြတဲ့အတွက် အိပ်နေစဥ်မှာပဲ တခြားမြို့ကို ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဟိုတယ်မှာလည်း တစ်ညတည်းခိုစရာမလိုဘဲ မနက်ကတည်က ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို သွားဖို့ အချိန်ပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကျည်ဆန်ရထားရော၊ လေယာဥ်ပျံရော ညအချိန်မှာ ပျံသန်း၊ ပြေးဆွဲတာမျိုး ရှိပေမယ့် အချိန်ကုန်အသက်သာဆုံးကတော့ ဘတ်စ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘူတာအရှေ့မှာ ရပ်ပေးတဲ့အတွက် လေယာဥ်ပျံလိုမျိုး မလိုအပ်ဘဲ စောစောသွားလာရတာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဘတ်စ်ကားနဲ့ဆိုရင် အိပ်လိုမရလောက်ဘူးထင်တယ် ဆူညံနေမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့ တွေးမိသူများ ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဘတ်စ်ကားတွေက သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ပျောက်ဆုံးသွားစေမှာပါ။
Reborn ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တိုကျိုနဲ့ ရှင်းအိုဆာကာကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စ်ကားအတွင်းပိုင်းက ဒီလိုပုံပါ။
ထိုင်လျက်နဲ့ ဘေးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တခြားခရီးသည်တွေကို မမြင်နိုင်ပါဘူး။
ဖုန်းအားလည်း သွင်းနိုင်ပြီး အားသွင်းတဲ့အချိန် ဖုန်းမပြုတ်ကျစေဖို့ အိတ်လေးလည်း ထားပေးထားပါတယ်။
ဘယ်ဘက်မှာလည်း အဝေးထိန်းခလုတ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ထိုင်ခုံကို အနောက်ထိလှန်ချနိုင်တဲ့အတွက် ခြေထောက်ကို ဆန့်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အိပ်စက်နိုင်ပါတယ်။
ထိုင်ခုံအနောက်က ဒီလိုပုံစံလေး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲအနောက်ကို လှန်ချပါစေ ကိုယ့်အနောက်ကလူကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပါဘူး။
ဒီလောက်ဆို လေယာဥ်ပျံရဲ့ အထက်တန်းထက်တောင် ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ရပါသေးတယ်။
အစားအသောက်နဲ့ လေယာဥ်မယ်ချောချောလေး မရှိပေမယ့်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျည်ဆန်ရထားထက် များစွာ ဈေးသက်သာပြီး ဟိုတယ်တစ်ညတာတည်းခိုခ သက်သာရမယ်ဆိုတာကို တွေးကြည့်ရင် ဘတ်စ်ကားနဲ့သွားတာက ဈေးအလွန်သက်သာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တိုကျိုကနေ ညဘက်မှာ ထွက်လာပြီး နောက်တစ်နေ့ မနက် အိုဆာကာရောက်မယ်။
အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေ စားမယ်၊ Universal Studios Japan မှာ သွားလည်ပြီး ညရောက်တဲ့အခါ တိုကျိုပြန်တဲ့ဘတ်စ်ကားကို စီးလိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်နေကုန်လည်ပတ်နိုင်ပြီး နှစ်ညအိပ်ဟိုတည်ခ သက်သာနိုင်တာက ဒီညဘတ်စ်ကားတွေရဲ့ အားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအဆင်ပြေလှတဲ့ဘတ်စ်ကားက အခုအချိန်ထိတော့ တိုကျို – အိုဆာကာကိုပဲ ပြေးဆွဲနေပေမယ့် တခြားဘတ်စ်ကားတွေကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကို ပြေးဆွဲနေပါတယ်။
သုံးတတ်မယ်ဆိုရင် အချိန်ရော ငွေကြားပါ ချွေတာနိုင်ပြီး အကုန်အကျသက်သာစွာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းကို ခရီးသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို လာရင် သေချာပေါက် ဘတ်စ်ကားကို စီးကြည့်ပါနော်။
စကားမစပ် ဒီဘတ်စ်ကားမှာ ကိုရိုနာရောဂါကာကွယ်မှုအနေနဲ့ ပိုးသတ်၊အနံ့အသက်ရှင်းစက် ၂ လုံး တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒါတွေကြောင့်လည်း အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဥ်တွေထက် ပိုစိတ်ချနိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
【ယန်း၅,၉၈၀နဲ့ first classလေယာဥ်စီးမယ်】
ဂျပန်လေတပ်ကာကွယ်ရေးအရေးပေါ်ပျံသန်းမှု နှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲ ၃၇၁ ကြိမ်ရှိကြောင်းသိရ
(24) ရက်နေ့ ကူးစက်လူနာအသစ် 195 ဦး အတည်ပြု !!!
“ဝမ်းနည်းစရာသတင်း” ကာတွန်းကြိုက်သူတွေရဲ့ သီးသန့်နေရာဖြစ်လာတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လှလှလေး